Mu’tamarkaan ayaa socday Ilaa bishii December1, 2013 aydoo halkaas lagu qaadaa dhigiyey arimo badan oo qoyska ku saabsan. Halkaaso oo ay culumo ka kala timid gobolada markeeykan kuwa kamid ah ay ooga faa’iideeyey dad fara badan oo daneeynayey mutamarka. culumadaas ayaa cilmiigooda illhay baray ooga haqabtiray walaalahooda reer Boston. Ayagoo ay isla kaashadeen culumada reer boston, odyaasha, waxgradka, dhalinta iyo dhamaan bushada dhinicyadeeda kala duwan. Mutamarkan aadka u qeeymaha badan ayaa lafilayaah inuu saameyn weyn ku talaalo dhamaan dadkii kasoo xaadiray. Mutamarkaan ayaa ahaa mid siku dumay si wanaagsan bushada reer Boston qeeybaheeda kala duwan.
Waxaana kasoo qeeyb qaatay dad aad iyo aad ujecel diintooda, daneeynayah howla kusaabsan mustaqbalookada, kan caruurdooda marka loo hormariyo howlaha qooyska iyo waxii laxariirah. Waxaa la oran karaah culumada ayaa aad ooga haqabtiray bushada waxaabo aad u farabadan oo badanaa soo wajihi karah qofkastoo kunool wadamada galbeedka.
Dadkii hal kaas kahadlay ayaa adeegsanayey luuqada Englisha iyo afsomaliagaba hadba dhinicii ayku habooneyd. Saaso kale waxaa halkaas goob joog ka ahaa ogana faa’deeyey dadka halkaas isgu yimid qeeyb kamid ah waaxaha ama hayadaha soomalidu hugaamiso ee ka howlgalah magaalada Boston kuwaasoo ka caawiyah somalida macluumaad badan. Hadaba hoos waxaa ku qoran barnaamijyadii halkaa ka baxay oo kookooban.
Mutamar sat Nov 29 2013